अब सिंहदरबार पनि धुर्मुसलाई दिए हुन्छ
Thursday, 04.12.2018, 11:25am (GMT5.5)
देश विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरुको निकम्मापनले गर्दा नेपालको सत्ता चर्को आलोचनाको विषय छ । विकास जनताको चाहना अनुसार पटक्कै हुने गरेको छैन । नेताहरुको स्वार्थ अनुसार योजना चयन हुने गरेका कारण राष्ट्रिय पहिचानका क्षेत्रमा समेत सरकारी लगानी वेवास्ता भैरहेको छ । यस्तैमा पर्दछ क्रिकेट रंगशाला ।
अहिले हाँस्य कलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) यतिबेला नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियानमा छन् । नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि जनताबाट उठेको रंगशाला चाहियो भन्ने नारालाई साकार पार्न धुर्मुस जुटेका हुन् । हुन पनि पूर्वाधारबिना नेपाली क्रिकेटले जसरी विश्वमा धाक जमाउन सक्यो यसमा सरकारको कुनै लगानी छैन भन्दा फरक पर्दैन । प्रतियोगिता जितेर आएपछि केही लाख व्यक्तिगत पुरस्कार दिने बाहेक क्रिकेटको विकासका लागि सरकारले केही गरेको छैन ।
जितेपछि बधाई र पुरस्कार दिनेले क्रिकेटको विकास गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउनुपर्छ, नेपालमा ठूला प्रतियोगिता खेलाउनुपर्छ भन्ने सोच्दै सोचिएन । जनताले क्रिकेट रंगशाला माग गरिरहँदा सरकारहरुका लागि यो चुनावी नारा मात्रै बन्यो । चार वर्षअघि टी २० विश्वकप खेलेपछि हरेक सरकारले थुप्रैपटक रंगशाला बनाउने बाचा गरे । तर, अवस्था जस्ताको तस्तै । सरकारले रंगशाला बनाउने कुनै पहल नगरेपछि लागिपरे समाजसेवी कलाकार धुर्मुसले घोषणा गरे रंगशाला बनाउने भनेर । उनको टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा गएर जमिन हेरिसकेको छ । धुर्मुस तातेपछि प्रदेश सरकारहरुले जमीन दिने भन्दै भव्य स्वागत गरे । बाचा गरे । धुर्मुसलाई जमीन दिने घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।
योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हैन । उनीहरुले रंगशाला बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर ससरकारी ढुकुटी बोकेर बसेकाहरुले एकजना कलाकारलाई रंगशाला बनाइदेउ भनेर गुहार माग्नु र हामी सहयोग गर्छौं भन्नु निकम्मापन हो । एउटा रंगशाला बनाउने कुराले सिंगो देश हल्लिनु अर्को लाजमर्दो स्थिति हो । तर, यहाँ यस्तै छ । यस्तै हो भने सिंहदरबार पनि धुर्मुसलाई दिए हुन्छ भन्नेन टिप्पणी पनि भए ।
अर्कोतिर जनताले विकासको चाहना र उनीहरुले राष्ट्रिय पहिचानलाई अझ माथि उठाउन के चाहेका रहेछन् भन्ने पनि देखाइदिए । धुर्मुसले रंगशाला बनाउने निश्चित गरेपछि उनी पुगेका ठाउँमा जनताको व्यापक उत्साह देखेर छक्क परे । सबैले आआफ्नो स्थानमा रंगशाला बनाइदिए हुने आशय राखे । टोलीले रुपन्देही, चितवन र हेटौंडामा रहेका जग्गाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । यसै गरी काठमाडौं फर्किने क्रममा चोभारमा रहेको सरकारी जग्गाको कुरा आएपछि त्यो पनि हेरिएको छ ।
हेरिएका सबै जग्गाहरु रंगशाला निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको बताउँदै धुर्मुसले खेलकुद सम्वद्ध सरकारी निकाय, क्रिकेट खेलाडीहरु लगायत सबै पक्षसँग बसेर निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् माग त सबैतिरका जनताको उत्तिकै छ तर, बनाउने एउटा मात्रै हो । जुन स्थान छनोट गरे पनि सबै जनताले साथ दिनु हुनेछ । किनभने यसअघि चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा उनले देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीबाट अपार साथ र सहयोग पाएका थिए । उनीमा यही कुराको उत्साह छ । राम्रो काम गर्ने हो भने जनताले साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास छ र जनताले सहयोग पनि गरेका छन् ।
नेपालमा धेरै गफ चुटेर आफलाई मिडियाको चर्चामा ल्याउनेहरु मात्र छन् । तर धुर्मुस भने कामै गरेर सबैको मुखमा बुझो लगाइदिन्छन् । त्यसैले पनि उनले क्रिकेट रंगशाला बनाउने कुरा गरेपछि व्यापक उत्साह आयो । सरकारले बनाउने भनेको भए कसैले पत्याउने थिएन । विगत आधा दशकयता रंगशाला बनाउने प्रतिबद्धता पटकपटक गरिएकै हो ।
सुरुमा जग्गा हेर्न धुर्मुस सुरुमा काठमाडौंबाट भैरहवा गएका थिए । त्यहाँको विमानस्थलमा रातिसम्म मानिसहरु प्रतिक्षामा बसेका रहेछन् । त्यो भीडमा युवा मात्र होइन, बुढाबुढीदेखि बच्चाबच्चीसम्म थिए । टोलीले सैनामैना नगरपालिकामा रहेको ६५ विगाह जग्गा अवलोकन गरेको थियो । सैनामैनाका मेयरले यो जग्गामा रंगशाला बनाउन प्रस्ताव गरे । यसैगरी भैरहवामा रहेको सिद्दार्थ रंगशालालाई स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ कि भनेर टोली त्यहाँ पनि पुग्यो । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग टोलीले भेटघाट गर्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा आउने भए सबै सहयोग गर्ने तत्परता व्यक्त गरे ।
धुर्मुसको टोलीले भरतपुर चितवनमा रहेको महानगरपालिकाद्वारा प्रस्तावित चितवन रंगशाला हे¥यो । त्यो जग्गा धेरै दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहर्याइएको छ । वरिपरीको सुन्दरताले धुर्मुस उत्साहित बने । भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले महानगरककोा बैठक राखेर धुर्मुसलाई जग्गाा दिने घोषणा गरिन् ।
त्यसपछि प्रदेश ३ का मुख्य सचिव डोरमणि पौडेलको आग्रहमा टोली हेटौंडा पुग्यो त्यहाँ २४ विगाह सरकारी जग्गा कम्पाउन्डले घेरेर राखिएको रहेछ । पौडेलले पनि जग्गा दिनुका साथै सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यी घटनाक्रमले के सिद्ध गरेको छ भने नेपालमा विकासा गर्छु भनेर ओहदामा पुगेकाहरुमा कुनै क्षमता छैन । उनीहरु अरुले काम गरिदिए सहयोग गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । के यसरी देश र प्रदेश चल्छ ?
हुन पनि हो– काठमाडौंको मुलपानीमा निर्माणाधीन रंगशाला कहिले पूर्ण हुने हो पत्तो छैन । सम्भवतः त्यो भन्दा पहिले नै धुर्मुसले रंगशाला बनाइसक्ने अवस्था छ । किनभने सरकारी कामको नमूना त भूकम्प पीडितका घर निर्माणबाटै देखिएको छ । सरकारले एउटा एकीकृत बस्ती बनाउन नसक्दा उनीहरुले भूकम्प पीडित र तराईका अति पिछडिएका मुसहर र बाढी पीडितका लागि गरेर चारवटा एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गरेका छन् ।
उनीहरुको यही लगन र उत्साह देखेर जनताले सरकारलाईभन्दा बढी विश्वास गरेका हुन् । यसै अवस्थाबाट सरकार लज्जित हुनुपर्ने हो ? तर, उसमा लोकलाज र लोकभय पटक्कै छैन । देश विकास नै गर्ने हो भने अब सिंहदरबारको चाबी पनि धुर्मुसलाई नै दिए हुन्छ भन्ने आवाज त्यसै उठेको हैन ।